Asan’ny Apostoly 20 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ashaninka Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Emberá (Catío) Emberá Avaratra Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guambiano Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla Jamaikanina Kreôla any Amin’ny Andilan-dranomasin’i Torres Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Laosianina Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Macua Makoshi Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mixtèque (Guerrero) Mooré Motu Myama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nhengatu Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rapa Nui Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Albaney Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Flamand Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Melanezianina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tiorka Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Asan’ny Apostoly 20:1-38
20 Rehefa nitsahatra ilay savorovoro, dia nampaka ny mpianatra i Paoly. Koa nampahery sy nanao veloma+ azy ireo izy, ary nankany Makedonia+ avy eo. 2 Nitety faritra maro tany izy ka nanao teny maro mba hampaherezana+ an’ireo mpianatra, ary tonga tany Gresy, 3 ka nijanona telo volana tany. Rehefa hiondrana an-tsambo ho any Syria izy, dia nisy Jiosy nitetika ny hamono azy,+ ka nanapa-kevitra ny hiverina hamakivaky an’i Makedonia izy. 4 Niaraka taminy i Sopatera+ zanak’i Pyro avy any Beria, sy Aristarko+ sy Sekondo samy avy any Tesalonika, sy Gaio avy any Derbe, sy Timoty,+ ary Tykiko+ sy Trofimo+ samy avy any amin’ny faritr’i Azia. 5 Nanohy ny diany ireo ka niandry anay tany Troasy.+ 6 Izahay kosa anefa niondrana an-tsambo avy tany Filipy, taorian’ireo andro fankalazana ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay,+ ka tonga tany amin’izy ireo tany Troasy+ tao anatin’ny dimy andro, ary nijanona fito andro tany. 7 Ny andro voalohan’ny+ herinandro, dia tafangona izahay mba hiara-misakafo. Ary nanomboka nandaha-teny tamin’izy ireo i Paoly, satria handeha izy ny ampitson’iny. Naharitra hatramin’ny misasakalina ny lahateniny, 8 ka nisy jiro maro nanazava ilay efitrano ambony rihana+ nivorianay. 9 Nisy tovolahy atao hoe Eotyka nipetraka teo am-baravarankely ary resin-tory tanteraka izy raha mbola nanao ny lahateniny i Paoly. Dia nitambotsotra izy, raha iny mbola natory iny ka nianjera avy teny amin’ny rihana faharoa. Rehefa narenina izy, dia hita fa maty. 10 Nidina anefa i Paoly ka niantoraka teo aminy+ ary namihina azy, dia niteny hoe: “Aza miantsoantso intsony fa efa niverina ny ainy.”*+ 11 Dia niakatra i Paoly ary nanomboka nisakafo ka nihinana. Ary rehefa avy niresaka elaela izy hatramin’ny maraina vao mangiran-dratsy, dia lasa tamin’ny farany. 12 Koa nentin’ny olona ilay zazalahy efa velona, ary fampiononana lehibe no azon’izy ireo. 13 Dia nandeha mialoha ho any an-tsambo izahay ka niondrana nankany Aso, fa any no nokasainay handraisana an’i Paoly. Nasainy nanao izany mantsy izahay, fa izy kosa nikasa handeha an-tongotra. 14 Rehefa tratrany tao Aso àry izahay, dia noraisinay ho ao an-tsambo izy ary nankany Mitylena izahay. 15 Niainga avy tao indray izahay ny ampitso, ka tonga tandrifin’i Kio. Nijanona vetivety tao Samo izahay ny ampitson’iny, ary tonga tao Mileto ny andro nanaraka. 16 Efa nanapa-kevitra i Paoly fa holalovana fotsiny i Efesosy,+ mba tsy ho lany fotoana any amin’ny faritr’i Azia izy. Tsy andriny mantsy izay hahatongavana any Jerosalema+ amin’ny andro Pentekosta, raha tratrany. 17 Na izany aza, dia naniraka olona avy tao Mileto hankany Efesosy izy, ka nampiantso ny anti-panahin’ny+ fiangonana. 18 Rehefa tonga teo aminy ireo, dia hoy izy: “Fantatrareo tsara ny fanaoko nandritra ny fotoana rehetra niarahako taminareo, hatramin’ilay andro voalohany nanitsahako ny faritr’i Azia,+ 19 ka nanompoako+ ny Tompo tamim-panetren-tena+ tanteraka sy tamin-dranomaso ary tao anatin’ny fitsapana nanjo ahy noho ny teti-dratsin’ny+ Jiosy. 20 Ary tamin’izany dia tsy niahotra aho nilaza taminareo izay rehetra nahasoa, sy nampianatra+ anareo ampahibemaso sy isan-trano.+ 21 Ary nanome fanazavana+ feno* tamin’ny Jiosy sy ny Grika aho, momba ny fibebahana+ amin’Andriamanitra sy ny finoana an’i Jesosy Tompontsika. 22 Ary ankehitriny, dia efa an-dalana ho any Jerosalema aho satria tsy maintsy manaraka ny fitarihan’ny fanahy+ masina, kanefa tsy fantatro izay hanjo ahy any, 23 afa-tsy izay ambaran’ny fanahy masina+ amiko foana isan-tanàna, dia ny hoe misy gadra sy fahoriana miandry ahy+ any. 24 Tsy heveriko ho zava-dehibe anefa ny aiko, toy ny hoe sarobidy amiko,+ raha mba azoko atao ihany ny hamita ny fihazakazahako+ sy ny fanompoana+ izay noraisiko+ tamin’i Jesosy Tompo, dia ny hitory amin’ny fomba feno ny vaovao tsara ny amin’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra.+ 25 “Ary fantatro ankehitriny fa tsy hahita ny tavako intsony ianareo rehetra izay nitoriako ilay fanjakana. 26 Koa ataoko vavolombeloko ianareo anio fa afaka amin’ny ran’ny+ olona rehetra aho, 27 satria tsy niahotra nilaza taminareo ny sitrapon’Andriamanitra+ rehetra. 28 Tandremo+ ny tenanareo+ sy ny ondry+ rehetra izay nanendren’ny fanahy masina anareo ho mpiandraikitra,+ mba hiandrasanareo ny fiangonan’Andriamanitra,+ izay novidiny tamin’ny ran’ny+ Zanany. 29 Fantatro fa rehefa lasa aho, dia hisy amboadia+ masiaka hiditra eo aminareo, ary tsy hiantra ny ondry ireny. 30 Ary avy aminareo ihany no hipoiran’ny olona manolana hevi-teny+ mba hitaomana ny mpianatra hanaraka azy.+ 31 “Koa miambena hatrany, ary tadidio fa tsy nitsahatra nananatra+ ny tsirairay taminareo tamin-dranomaso aho nandritra ny telo taona,+ na andro na alina. 32 Ary ankehitriny dia ankiniko amin’Andriamanitra+ sy amin’ny teny momba ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa ianareo. Afaka mampahery+ anareo mantsy izany teny izany sady afaka manome lova anareo miaraka amin’ireo nohamasinina+ rehetra. 33 Tsy nitsiriritra volafotsy na volamena na fitafian’iza na iza aho,+ 34 fa fantatrareo tsara fa ireto tanako ireto no nahazoako izay nilaiko+ sy nilain’ireo niaraka tamiko. 35 Nasehoko anareo tamin’ny zava-drehetra fa amin’ny fiasana mafy+ toy izany no tsy maintsy anampianareo an’ireo mila ampiana,+ sy ahatsiarovanareo ny tenin’i Jesosy Tompo nanao hoe: ‘Mahasambatra kokoa ny manome+ noho ny mandray.’” 36 Rehefa avy nilaza izany izy, dia nandohalika+ niaraka tamin’izy rehetra ary nivavaka. 37 Nitomany mafy tokoa izy rehetra, ary namihina ny vozon’i+ Paoly, ka nanoroka+ azy tamim-pitiavana, 38 satria nalahelo mafy izy ireo noho ny teniny hoe tsy hahita ny tavany+ intsony ireo. Koa nanatitra+ azy hatreny an-tsambo ireo.
^ Na: “nitory tamin’ny fomba feno.”
Asan’ny Apostoly 20